जानीराखौ ! बिहिबार जन्मेको मानिसको स्वभाव भाग्य र च’रित्र कस्तो हुन्छ ? – Enepali Samchar
April 24, 2021 April 24, 2021 adminLeaveaComment on जानीराखौ ! बिहिबार जन्मेको मानिसको स्वभाव भाग्य र च’रित्र कस्तो हुन्छ ?
e nepalisamchaar // काठमाडौं । मानिसको भाग्य, आनी’बानी लगाएत बिभिन्न कुराहरु जन्मवार, महिना र समयले निर्धारण गरेको हुन्छ । को कुन बार र कति बेला जन्मेका हुन्, उक्त साइतले स्वभाव र चरित्र नि’र्धारण गर्ने ज्योतिषहरुले बताउने गरेका छन् ।बिहिबार जन्मेका मानिसहरु कस्ता हुन्छन् र उनीहरुको च’रित्रको विषयमा विभिन्न हामीले श्रोतबाट जानकारीहरु लिएका छौ ।
बिहिबार जन्मेका व्यक्ति निकै मेधावी, शान्त र निकै समझदार हुने गर्दछन् ।तपाई मानिसहरुलाई निकै इ ज्जत गर्नुहुन्छ त्यसका’रण मानिसहरुका लागि आदर्श पनि हुनु’हुन्छ ।तपाई सफा र स्व’च्छ बिचारधाराका मालिक हुनु’हुन्छ ।तपाईको भित्र नेतृत्व गर्ने गुण हुन्छl
त्यसका’रण तपाई जुन क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ त्यहाँको उच्च पद अवश्य हाँसिल गर्नुहुन्छ । तपाई निकै मेहनत गर्नुहुन्छ र आफ्ना सामानहरु आफूले भने कै ठाउँमा होस् भन्ने चाहनुहुन्छ ।स्वतन्त्रता तपाईलाई मन पर्ने भएका का’रण बन्धनमा बस्न चाहनुहुन्न ।
तपाई चाँडै नै मानिसहरुलाई विश्वास गर्नुहुन्छ जसको प्रतिफल तपाईंले भोग्न पर्छ ।तपाईको धेरै साथी हुन्छन् तर साँचो मित्र निकै कम । तपाई स्ट्रेट फरवार्ड हुनु’हुन्छ र सुन्दरताको प्रिय हुनु’हुन्छ ।बिहिबार जन्मेका व्यक्ति आकर्षक र अन्टेन्सन प्रिय हुने भएका का’रण धेरैजसो यिनिहरु प्रेम विवाह गर्छन् । उनीहरुको वैवाहिक जीवन सुखमय हुने गर्दछ ।
खाली पेटमा भूलेर पनि खानु हुदैन यि ७ चिज । नत्र जिन्दगीभर पछुताउनु पर्ला !
काठमाडौंमा १० रुपैयाँमा छानी छानी कपडा लिन पाइने भएपछि किन्नेको भिड ! ( हेर्नुहोस भिडियो सहित )